पत्रकार रवी लामिछाने ज्यु, सबिना महर्जन खोई? भिडियो सहित – Complete Nepali News Portal
पत्रकार रवी लामिछाने ज्यु, सबिना महर्जन खोई? भिडियो सहित
September 22, 2017	184 Views
यतिबेला न्युज २४ टेलिभिजनबाट प्रस्तुत हुने कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँग’ जनतामाझ लोकप्रिय बनिरहेको छ। कयौ जनताले कार्यक्रम प्रस्तोता रवी लामिछानेलाई त भगवान नै मानिरहेका छन भने कतिले गरिबको मसिहाको रुपमा लिएका छन। केहि समयअघि मात्र जापानबाट हराएकी सबिना महर्जन कहाँ छिन ? भन्ने बिषयमा कार्यक्रममार्फत रवी लामिछानेले सक्दो सहयोग गर्ने र यसबारेमा अपडेट प्रस्तुत गर्ने वाचा समेत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सबिनाको दिदि बिनु महर्जनले आफ्नो बहिनीको बारेमा सम्पूर्ण बर्णन गरेकी थिइन् । गरिबको मसिहा बनेका रवी लामिछाने ज्युलाई प्रश्न छ, कहाँ छिन त सबिना महर्जन ? यतिका समय बित्दा समेत खोई त सविनाको बारेमा अपडेट? रवी ज्यु, जापान स्थित नेपाली दुतावास, सरकार र एनआरएन जापान समक्ष निवेदन त गर्नुभयो होला तर त्यसको बारेमा जनतालाई कहिले बताइदिनुहुन्छ ? रोदन र पीडा बोकेर तड्पीरहेकी बिनु महर्जनको घाउमा कहिले मलम लगाउनुहुन्छ ? जवाफ दिन सक्नुहुन्छ ?
आफ्नो सुनौलो भबिष्यका लागि सन् २००८ को अप्रिल महिनामा जापानको फूकोओकास्थित एसिया जापानिज एकडेमीमा आएकी सबिना महर्जन बिगत ९ बर्षदेखि सम्पर्क बिहिन भएकी हुन् । सबिना फुकुओकाको मिनामी कुनोमामा रहेको ताकामिया स्टाइल भ्युको ६०१ नम्बरको आफ्नै कोठाबाट सन् २००९ मा रहस्यमय तरिकाले सम्पर्क बिहिन भएको बारेमा हामीले पटकपटक समाचार सम्प्रेषण समेत गरेका थियौ। पाटनमा स्थायी घर भएकी सबिना पाटनमै रहेको स्ट्यान्डर्ड जापानिज भाषा स्कुलबाट फूकोओका गएकी थिइन् ।
विभिन्न व्यक्तिहरुले ‘सबिना महर्जन खोज अभियान’ नामक अभियान नै चलाएर खोज कार्यलाई अगाडी बढाईरहेको अवस्था छ । यस्तै टोकियोमा बस्ने आर्यन अधिकारीले सविनाको खोज कार्य अभियान गरिरहेका छन । जापानस्थित नेपाली दुतावासमा उनले बुझ्न खोज्दा दुतावासले पहल गरेतापनि चुस्त नभएको उनले बताए। उनका अनुसार जापानको प्रहरीले दुतावासमा खबर नगरी प्रतक्ष्य इन्टरपोललाई जानकारी गराउनाले खोजमा गार्हो हुने बताए । अधिकारीले फोटो देखाएर सोध्दा सम्भव नहुने कारण हस्ताक्षर अभियान नै संचालन गरि खोज कार्यलाई अगाडी बढाएका छन ।
सबिनाको दिदीले केहि हप्ता अगाडी फेसबुक लाइभ गरेर सविनालाई खोजिदिन सबैलाई आग्रह समेत गरेकी थिइन् । रोदन र पिडा सहित सबैसँग आफ्नो दुख बाड्दा समेत उनले अहिलेसम्म बहिनीको बारेमा कुनै जानकारी पाउन सकेकी छैनन् । हामीले जापानस्थित सबिना महर्जन पढ्ने बिद्यालयमा बुझ्न खोज्दा एसिया जापानिज एकडेमीका अध्यक्ष धर्म अधिकारीले समेत सविनाको बारेमा बोल्न चाहेनन् । यस्तै जापानस्थित धेरै सहयोगी मनहरु जो सबिना महर्जनको खोजि गर्न चाहन्छन उनिहरु समेत विभिन्न रहस्यबाट सहयोग गर्न हिचकिचाउने गरेको पाइन्छ ।
पिएनपिखबरको जापानको फुकुओका स्थित बिशेष श्रोतले सम्बन्धित निकायमा बुझ्न खोज्दा सबिना महर्जनको बिषयमा सोधपुछ नगर्नु नै राम्रो भन्ने अभिव्यक्ति सहित यदि सोधपुछ गरेमा सबिना जस्तै गायब पारिदिने धम्कि समेत आएको बताए । उनका अनुसार सबिना महर्जन काण्डमा जापानमा सक्रिय माफियाहरुको संलग्नता रहेको र उनीहरु जापानमा निकै शक्तिशाली आपराधिक समुहको रुपमा चिनिने समेत बताए ।
हाम्रा सहकर्मीहरुले गरेको अनुसन्धानको क्रममा टोक्यो स्थित जापानी दुतावासले फुकुओकाको सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने गरेको तर स्थलगत भ्रमणमा नगई झारा टार्ने काम मात्र गरेको खुल्न आएको छ। साथै दुतावासका कर्मचारीहरु आर्थिक हिनामिनामा लाग्ने गरेको थुप्रै प्रमाणहरु भेत्तिएक छन । यतिसम्म कि दुतावासका कर्मचारीहरु स्ट्याम्प प्याडको प्रयोग गरेपछि पनि रसिद नकाटी भ्रस्टाचारी संस्कृतिलाई मलजल गरिरहेका आरोप समेत लगाएका छन। जापानस्थित नेपालीहरुलाई नेपाल सरकारको उपस्थिति छ भन्ने सम्म प्रत्याभूति हुन नसकेको अवस्थामा सबिना महर्जन काण्डले यतिबेला सारा नेपालीलाई सशंकित बनाएको छ ।
अनुसन्धानकै क्रममा हाम्रा सहकर्मीले अर्को रोचक तथ्य पनि फेला पारेका छन । अध्ययनको लागि प्रमुख गन्तव्य बनिसकेको जापानमा नेपालबाट जाने युवतीहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। सबिना महर्जन पनि आफ्नो सुन्दर सपना बुनेर जापान पुगेकी थिइन्। चहकिला आँखा, सुगठित शरीर र सुन्दर मुस्कान भएकी सबिनाको आकर्षक शरीर नै उनी बेपत्ता हुनुको प्रमुख कारण रहेको हाम्रा सम्बाददाताले अनुमान लगाएका छन । अनुसंधाको क्रममा सबिनासँगै जापान जाने युवतीहरुमध्ये सबिना नै सबैभन्दा आकर्षक र सुन्दर थिइन् । बिशेषत जापानमा माफियाहरु विदेशबाट आउने युवतीहरुको खोजीमा बस्ने गरेको र सहि समयमा उनीहरुलाई गायब बनाउन सक्रिय भएका प्रशस्तै उदाहरण छन ।
सबिना महर्जन त एक सतहमा देखिएकी पात्र मात्रै हुन् । सबिना जस्तै कतिपय युवतीहरु यो भुमरीमा नफसेका भने होइनन । केहि समय अघि मात्रै एक जापानकै फुकुवोकामा अर्की एक नेपाली युवती बेपत्ता भएकी थिइन्। मिडियामा नआएका यस्ता कतिपय घटना जापानमा नै अझै पनि रहस्यमय बनेर बसेका छन ।
जापानमा रहेका एनअआरएनहरु त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको अवस्था सुधार गर्ने, हकहितको बारेमा कुरा गर्ने गरेतापनि उनीहरुको चिल्ला कुरालाई हात्तिको देखाउने दाँतसँग तौलिन सकिन्छ। फुकुओकाका एनआरएन क्षेत्रिय अध्यक्ष लक्ष्मण बानियाँले समेत सबिना महर्जन काण्ड बारेमा चासो देखाइएको पाइदैन । एनआएनहरुको पनि जापानमा सक्रिय रहेका माफियाहरुसँग गहिरो तालुक त छैन ? तपाई आफै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ।
कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगका प्रस्तोता रवी लामिछाने जो करोडौ नेपाली मनका ढुकढुकी बनिसकेका छन, सबिना महर्जन काण्डको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन उनलाई आग्रह छ । जसले पिडा र रोदन सहितको घाउ बोकेर तड्पीरहेकी एक दिदीले आफ्नो बहिनीको अवस्था बारे बुझ्न र रहस्यमयी दुनियाँबाट बाहिर आइ चयनको सास फेर्ने अवस्था सिर्जना हुन सकोस । अहिलेको चर्चित पत्रकार र करोडौ जनताको आशाको केन्द्र रवी लामिछाने ज्यु, आग्रह छ कि एक दिदी जो बिगत नौ बर्ष देखि आफ्नो बहिनिसँग सम्पर्कविहीन भएर मर्नु न बाच्नुको दोशाधमा बाचेकी छन उनलाई चयनको सास फेर्ने अवसर दिलाइदिनुहोस र वियोगमा तड्पीरहेका उनका आमाबाबुलाई बाटो देखाइदिनुहोस । करोडौ जनता तपाईको साथमा छन र पर्खाइमा छन यो बुझ्न कि सबिना महर्जन कहाँ छिन ? सबिना महर्जन कहाँ छिन ? पिएनपिखबर।